Taom-baovao iraisan’ny Malagasy Hatao any Mahajanga ny andiany fahefatra
Olona sitrana tao amin’ny FITRAMA Nankasitraka an’i Jean Nirina R
Sitrana avokoa ny ankamaroan’ireo marary nandalo sy nitsabo tena tao amin’ny orinasa Mpitsabo Malagasy FI.TRA.MA raha araka ny fanazavan-dRafanomezantsoa Jean Nirina omaly, tale jeneralin’ny orinasa.
Efa miomana amin’ny fandraisana ny taom-baovao iraisan’ny Malagasy rehetra andiany fahefatra hotanterahina ao Mahajanga sahady ny solontenan’ny foko avy any an-toerana tonga niatrika ny andiany fahatelo notanterahina tany Toamasina farany teo.
Nambaran’izy ireo fa na vehivavy aza izy ireo dia vonona ary efa eo am-piketrehana sahady ankehitriny. Hisy ihany koa fananganana vaton’ny firaisam-piraisam-pirenena toy ny natao teto Antananarivo sy tany Fianarantsoa ary Toamasina na dia misy aza ireo mpanakiana. Volana septambra ihany no hanatanterahana ny hetsika amin’ny taona 2020 ho avy io izay nambaran’izy ireo fa vanim-potoanan’ny lohataona tokony hankalazana ny taom-baovao Malagasy fa tsy volana hafa toy ny an’ny hafa. Fahombiazana tamin’ny ankapobeny ny taom-baovao iraisan’ny Malagasy notanterahina farany teo tany Toamasina. Efa manomboka manaiky sy miara-miasa feno amin’ireo raiamandreny ara-drazana mantsy ireo tompon’andraiki-panjakana, ankoatra ny fitombon’ireo olona tonga manatrika izany hatrany hatrany. Ny fiverenana amin’ny fankatoavana sy soatoavina Malagasy ihany moa raha araka ny fanazavan’ny filohan’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana Atoa Jean Eric Rakotoarisoa no hahafahana mampandroso ny firenena raha tsiahivina izay tsy maintsy hampitaina amin’ny taranaka faramandimby mba tsy takon’ny fiarovan’ny teknolojia ankehitriny.